हाँस्यकलाकार तम्मेबुढाको सरिनासँग विवाह : विवाह भएको ७ महिनासम्म किन लुकाए विवाहकाे कुरा ?यस्तो कारण - Medianp.com
सोमबार, १३, माघ, २०७६
हाँस्यकलाकार तम्मेबुढाको सरिनासँग विवाह : विवाह भएको ७ महिनासम्म किन लुकाए विवाहकाे कुरा ?यस्तो कारण
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:११0
काठमाडौँ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हाँस्यकलाकार विल्सन विक्रम राई तम्मेबुढाको एक युवतीसँगको विवाहको तस्विर भाइरल भएको छ । जुन तस्विरलाई देखेर सबैजना झुक्किएका छन् । कसैले शूटिङको तस्विर भनेका छन् भने कसैले रियल तस्विर भनेका छन् । त्यसैले अहिले तम्मेको दर्शकहरुले रियल र रिल कुन विवाह हो थाहा पाउन चाहेका छन् । वास्तवमा यो उनको रिल नभई रियल विवाह हो । यो कुराको विल्सन आफैले बताए ।
कहिले भयो विवाह ?
गत वर्षको फल्गुनमा उनले झापाकी सरिना लामासँग मागी विवाह गरेका थिए। उनी र सरिना सानै देखि स्कुलमा सँगै पढने भएकाले धेरै मन पराउथेँ । तर सरिनासँग यो कुरा भन्न सकेका थिएनन् । त्यसैले अहिले उनी र परिवारसँग कुरा मिलेपछि विवाह गरेको बताए ।
विवाह भएको ७ महिनासम्म पनि किन लुकाए ?
यसअघि पनि उनको विवाहको तस्विर फ्याटफुट्ट सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । तर सबैले फिल्मको शूटिङको तस्विर भएको अनुमान गरेका थिए । अहिले यो कुराको विल्सन आफैले सरिनासँग फागूणमा इन्गेजमेन्ट गरेर बिवाह भव्य गर्ने योजनामा बनाएको ,तर सरिनाको ‘लामा परम्परा’ अनुसार ‘सुंगुर बर्ष’ भएकाले तत्काल बिहे गर्नुपर्ने भएकाले सानो बिवाह गरेको बताए । त्यस्तै उनी मिडियामा आउन नचाहेकोले पनि गोप्य रहेको बताए ।
को हुन् सरिना ?
झापाकी सरिना युएनमा काम गर्छिन् । तर, ‘भुटानी शरणार्थी’ सम्बन्धी प्रोजेक्ट बन्द भएपछि उनले काम छोडेकी छिन् । हाल विवाह पछि उनी विल्सनसँग रमाइरहेकी छिन् । विल्सन विभिन्न चलचित्रमा ब्यस्त छन् ।
भद्रगोलबाट बाहिरिएका जिग्री र पाँडेको टिमले नयाँ सिरियल ल्याउदै ,नेपाल टेलिभिजनमै विहीवार प्रशारण हुने
अक्षयको जन्मदिन पारेर ‘पृथ्वीराज’ को टीजर सार्वजनिक ,यो हुनेछ उनको ऐतिहासिक फिल्म